Ny famonoan-tena izay mandehandeha any amin'ny firenena manerana izao tontolo izao dia lafo ary noho ny fahafinaretana maro tsy azo idirana dia tafiditra ao amin'ny lohan'ny mpiray tanindrazana amintsika. Misy fanazavana tsotra vitsivitsy momba izany. Voalohany, mbola velona ny fahatsiarovana ny rindrin'ny vy an'ny fitondrana sovietika, nandritra ny dia ny fitsangatsanganana ivelan'ny sendika dia tsy nisy afa-tsy ny voafantina ary, mazava ho azy, ny olom-pirenena tsara. Ny antony faharoa dia amin'ny varotra. Ny mpandeha tsy dia lavitra loatra ny mpizaha tany dia liana amin'ny fividianana araka izay tratra amin'ny toetry ny fifaninanana maoderina, izany no mahatonga azy ireo mazoto mitory isan-karazany amin'ny serivisy tsy dia ilaina loatra, izay mitaky vola be, nefa miaraka amina fanangonan-tsonia ara-pihetseham-po ho an'ny fihenam-bidy sy fampiroboroboana.
Raha ny marina, afaka mandehandeha moramora ianao ary na dia saika maimaim-poana aza, dia tsy maintsy manapa-kevitra sy mametraka tanjona manokana ianao. Mazava ho azy fa tsy maintsy mampionona fampiononana ny fotoan'ny dia. Raha amin'ny teny hoe "mandeha" dia eritreretinao ny trano fandraisam-bahiny dimy kintana misy rafitra iray manontolo, dia azo inoana fa tsy natao ho anao ireo fomba ireo, satria raha te hanao dia lavitra ianao dia tsy maintsy mameno ny zava-drehetra ara-bakiteny. Ohatra, mandeha amin'ny bus fa tsy fiaramanidina, mijanòna any amin'ny trano fialantsasatra ao amin'ny efitrano fonenan'ny olona 5 sy ny sisa. Fa inona ireo fahasahiranana tsy maharitra, raha oharina amin'ny fahatsapana azonao?
Mandeha maimaim-poana izahay!
Noho izany, manolotra fomba amam-panao 10 ianao mba handehanana mora foana ary na dia maimaim-poana aza, omena ny fahalalàhana ny fiteny sy ny fampiasana fahaizana amin'ny Internet:
Hitchhiking - mety ho an'ny mpandray anjara amin'ny fitsangantsanganana budget. Ny mampiavaka azy dia izao no tsy hahalalanao lavitra - ny fara-tampony ao amin'ny firenena sy any ivelany, izay tsy misy fitondrana visa. Plus, ity fomba fitsaboana ity dia tsy azo antoka ary mba hisorohana ny tsy ho voafandrika, ny fahazoan-dalam-be dia manolo-tena mba hahaizana mialoha ny fitsipika mifehy ny fitondran-tena sy ny fitsipi-pitondrantena. Raha toa ka tanteraka daholo ny zava-drehetra, dia tsy misy afa-tsy ny mankany amin'ny toerana afaka maimaim-poana, fa koa ny mandany fotoana amin'ny làlana mahafinaritra sy mahaliana.
Fandaharam-pianarana ho an'ireo mpianatra miasa sy mitsidika, Au-Pair . Avelao handany ny fialan-tsasatra mandritra ny lohataona ianao fa tsy mahaliana fotsiny, fa ilaina ihany koa. Ireo masoivoho miasa amin'ny fampiasana mpianatra eo ambany fandaharan'asa, dia manome fifanarahana amin'ny antoko mpampiantrano, izay hanome trano, sakafo ary na dia ny karama aza. Ny fepetra iray manan-danja dia ny mahafantatra ny fiteny ao amin'ny firenena amin'ny lafiny tsara ary manana fahaizana asa sasany.
WWOOF dia fikambanana iray izay mandrindra ny lazan'ny agro - tourism . Miasa amin'ny toeram-pambolena mandritra ny adiny 6 isan'andro ianao, ny mpamboly dia manome sakafo sy fialofana ho azy.
Ny Nelpx.net dia loharanon-tserasera iray izay mitovitovy amin'ny an'ny teo aloha. Izy io dia mametraka fangatahana avy amin'ny olona manerana izao tontolo izao izay tsy manana "tanana" ampy - ho an'ny miasa ao an-jaridaina, fikarakarana biby, miasa ao amin'ireo toeram-ponenana sy ivon-toerana, sy ny sisa.
Mpilatsaka an-tsitrapo ao Kibbutz dia fikambanana ara-pambolena israeliana, izay misy ny fananan-tany, ny fitsipiky ny fandaniana sy ny asa. Ao no faly mandray ireo mpitsidika, satria ny asa dia mihoatra noho ny vonona. Ny mpandidy, araka ny fitsipika, dia omena asa mafy. Na izany aza, raha tsara ny miasa mandritra ny volana maromaro, dia afaka manaiky ny fifindrana any amin'ny toeram-piasana ianao.
Ny fandriam-pahandroana na fiompiana dia serivisy iraisam-pirenena izay manome fahafahana anao hitady toerana tsy hijanona ao amin'ny firenena vahiny, fa koa orinasa iray ho an'ny serasera sy fifandraisana tsotra. Ny fitsipiky ny serivisy dia voarara tsy mahazo vola avy amin'ireo vahiny, fa mandray ny fanampiana sy ny fanomezam-pahasoavana.
Mpitandrina - tranonkala iray ahafahan'ny olona manolotra ny tranony ho an'ny fialan-tsasatra malalaka amin'ny fifanakalozana fotsiny ny fikarakarana ny trano, ary koa ho takalon'ny fepetra mitovy amin'izany any amin'ny firenena hafa.
Mpitaingina tranon'olona - rafitra iray ahafahana mahita lehilahy sy mpikarakara tokantrano, izay nahatonga azy ireo ho afaka nanakalo tranokala tsotra ihany.
Appalachian Trail Conservancy - fandaharan'asa amerikana hiarovana sy hitandrovana ireo toerana voaaro voaaro. Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia manome trano sy sakafo.
Ny "Turtle Team" - fikambanana iray manerana izao tontolo izao, natao hiadiana amin'ny fanjavonan'ny sokatra amoron-dranomasina. Ny toerana manan-danja indrindra dia ny Ranomasina Karaiba. Safidy lehibe ho an'ireo tia ny bibidia.
Fialan-tsasatra amin'ny volana Mey
Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany
Dokam-barotra amin'ny visa ho an'ny Repoblika Tseky
Aiza no hankanesana any Prague?
Ejipta - andro isam-bolana
Inona no kiraro mety amin'ny hikorisa?
Ny valiny farany - inona no mendrika ny labozia?
Fanondroana ranoka amniotic - latabatra
Fanesorana ny fatiantoka
Toeram-pivarotana ho an'ny trano vita amin'ny polycarbonate
Fanafihan'ny Rhodesiana - ny toetran'ny sokatra
Vehivavy mavokely mena
Famolavolana ny fasan'ny trano manokana
Ahoana ny fomba hanesorana ny tola tsy misy tanany ao an-trano?
Ririnina ao anaty tranom-borona ao anaty vala
Endrika ho an'ny nify
Colostrum alohan'ny fanomezana
Ny renivola ho an'ny reny ho an'ny zaza 3
Miakanjo amin'ny sneakers
Plots amin'ny Spon Honey